08/01/2018 - Page 2 sur 4 -
Rivo Rakotovao : « Taonan’ny Fifidianana ny 2018 »
Taonan’ny fifidianana ny taona 2018, hoy ny filoha nasionalin’ny antoko Hvm. Efa vonona tanteraka amin’izany moa , ny antoko izay tarihiny, satria efa hatry ny ela no niomana fatratra. Noho izao tonon-taona izao kosa, dia …Tohiny
Orana mikija : Niakatra ny renirano eto an-drenivohitra
Araka ny vaovao farany navoakan’ny minisiteran’ny Rano, angovo ary solika, tamin’ny 5ora hariva, dia niakatra ny renirano eto an-drenivohitra ary tratra ny refy 4,00 m filazana loza mitatao na loko mena. Tafakatra 4,15m ny reniranon …Tohiny
Orinasa Beda Export Savi Nanisana : Nanafatra « héroïne » 1,3 kg tatsy Afrika Atsimo
Tsy kely lalana ny ratsy. Fantatra akehitriny fa ny orinasa Beda Export Savi, ao amin’ny Lot LLA 190, etsy Nanisana, dia nanafatra “héroïne” milanja 1,3 kg tatsy Afrika Atsimo. Tsy tody tamin’ny tetika nataony anefa …Tohiny
Sambava : Lehilahy voarohirohy nanolana
Nisehoana trangana fanolanana somary miaro herisetra indray tany amin’ny fokontany Maroambihy, distrikan’i Sambava ny antoandron’ny alakamisy lasa teo. Ny ampitso tokony ho tamin’ny 9ora maraina tany ho any no nahazoam-baovao fa naharenesana feom-behivavy iray niantso …Tohiny